Doorka Suugaanta Nabadda iyo Xuquuqda Dumarka ee Abwaan Nimco Aadan
Nimco Aadan Hurre oo ku caan ku ahayd magaca Nimco Gabaydo sannadkii 1969 ayey ku dhalatay deegaanka Gudubi oo ka tirsan degmada Oodweyne ee gobolka Togdheer. Sannadkii 1976 aey bilawday waxbarashada asaasiga ah iyada oo ka bilawday dugsiga Suuqsade ee magaalo xeebeedka Berba. Nimco-Gabaydo waxa ay ku barbaartay magaalada Berbera ee ay waxka baranaysay waxbarashada
Nuxurka Maansada Hoy weeye Nabaddu
Nabadda oo sal u ah jiritaanka umadda kasta, waxay u baahantahay ilaalin, dhawrid iyo weliba wacyi-gelin joogto ah oo umadda loogu sheegayo inay muhiim tahay wada-jirkooda iyo inay ka hortagaan waxkasta oo dhibaato ku ah xasiloonidooda. Suugaanleeyda Soomaalidu doorweyn ayey markasta ku leeyihiin nabad dhalinta iyo weliba daminta colaadaha iyaga oo adeegsanaya hibadooda suugaaneed. Xilliyo
La kulan Abwaankii ku guuleystay abaal-marinta tartanka Hoyga Maansada ee 2021
Mursal ilaa yaraantiisii wuxuu jeclaa suugaanta si uu u noqdo qof argti dheer oo dadka kalena ku dhiiri galiya Mursal Daahir markuu yaraa wuu jeclaa gabayada, muusiga iyo suugaanta. Wuxuu in badan dhegaysan jiray abwaannada iyo odayaasha la ixtiraamo. Si ka duwan carruurta kale ee da’diisa ah, waxa uu caado ka dhigtay in uu la
Abwaanad gabayada u adeegsaneysa xoojinta iyo dhiiragelinta is-bedelka
Raxma Xuseen Huriye waxa ay jeclaatay gabayada iyadoo yar, marka ay heeseyso iyada keligeed ayay heesi jirtay oo way ka xishoon jirtay inay maansadeeda la wadaagto dadka kale marka laga reebo qoyskeeda. “Waxaan ka dhashay qoys abwaanno ah, waxaana ku soo koray miyiga,” ayuu tiri Raxma oo 26-jir ah oo horey ugu guuleystay tartan gabay.
Muujinta aragtida fanka: Taageeridda haweenka Soomaaliyeed si ay u soo bandhigaan arrimaha iyaga quseeya
UNDP waxay kala shaqaynaysaa Somali Art Foundation oo ah (Xarunta Fanka casriga ah ee Soomaaliyeed) in la isku keeno gabayada haweenka, sawirrada iyo muuqaallada si loogu sameeyo bandhigyo. Dumarku waxay nolosha u arkaan si ka duwan ragga, marka waa muhiim in ay sheekooyinkooda sheegaan,” ayay tiri Zaima Cabdi Cali, oo kamarad gacanta ku haysa, iyada
Guuleystayaasha Tartanka Gabayada Hoyga Maansada 2021 oo la shaaciyay
Garsoorayaal ku xeeldheer suugaanta Soomaalida ayaa xulitaan ay ku sameeyeen boqollaal gabayo ah waxay ku soo xuleen Abwaanka ugu Gabayga Wanaagsan Sandka, Abwaanadda ugu Gabayga Wanaagsan Sanadka ee UNDP iyo Abwaanka ugu Da’da Yar sanadka.
Sanadguuradii 13-aad ee Isbuuca Bandhig Faneedka iyo Dhaqanka Soomaalida (Somali Week Festival) ayaa lagu soo gebagabeeyay magaalada London, iyadoo lagu soo bandhigay munaasabado kala duwan oo isugu jiray gabayo, suugaan, qoraalo iyo muusig. Bandhigga sanadlaha ah waxaa soo qabanqaabiyay Kaydka Fanka iyo Dhaqanka ee Soomaalida Kayd Somali Arts and Culture, oo ah hay’ad faneed
Tartanka Gabayada Sanadlaha ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho
Abaalmarintu waxay ka kooban tahay saddex qeybood oo kala ah; Gabyaaga ugu wanaagsan Sannadka, Gabadha ugu gabay wanaagsan Gabdhaha gabya (oo ay taageereyso hay’adda UNDP) iyo Abwaanka Da’da yar ee Sannadka. Tartanka waxaa Garsoorayaal ka noqonaya Abwaano magac & maamuus ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. 21 Sebteembar 2021 ­­­­­­­­­­­­­­­­­–– Tartanka Gabayada Soomaalidu maanta ayuu si